साइट माइग्रेसन: सब भन्दा साधारण गल्तीहरू! - Semalt चेतावनी
नमस्ते! आजको लेखमा, Semalt एक वेबसाइट माईग्रेसनको बेला गरेको सबैभन्दा सामान्य गल्तीहरूका बारे तपाईंलाई बताउन जाँदैछ। वेबसाइट माइग्रेसनको% ०% को साथ, कम्तिमा एउटा त्रुटि जुन म तपाईंलाई आज बताउनेछु प्राय आउँछ। दुर्भाग्यवस, यो मामला यो पनि हो कि सानो गल्तीले पनि हामीलाई यातायातको घाटा र दृश्यतामा कमी ल्याउन सक्छ।
त्यसोभए यदि तपाइँ वेबसाइट सार्न विचार गर्दै हुनुहुन्छ, यसलाई सार्नुहोस् वा डोमेन परिवर्तन गर्नुभयो भने, म तपाइँलाई पूरै लेख पढ्न प्रोत्साहित गर्दछु।
यदि तपाईं यस बिन्दुमा पुग्नुभयो भने, तपाईंलाई सम्भवतः थाहा छ माइग्रेसन भनेको के हो। वेबसाइट माइग्रेसनको मामलामा, हामी यसलाई धेरै प्रकारहरूमा विभाजन गर्न सक्दछौं।
ई-वाणिज्य बीचमा, सबैभन्दा लोकप्रिय प्रकारको माइग्रेसन भनेको एक CMS बाट अर्कोमा सार्नु हो। मानौं तपाइँको स्टोर सुरु मा सानो सूची संग बढेको छ, केहि उत्पादनहरु र तपाइँको आवश्यकताहरु साना थिए। जहाँसम्म, समयको साथ, स्टोर बढ्दै जाँदा, तपाईंको आवश्यकताहरू बढ्न थाल्छ, त्यसैले तपाईंले CMS परिवर्तन गर्ने बारेमा सोच्न थाल्नुभयो, जुन तपाईंलाई दिइएको CMS मा हुन चाहिने चीजहरू गर्न अनुमति दिनेछ।
र यहाँ तपाईं वास्तवमा CMS बाट अर्को CMS परिवर्तन गर्न विचार गर्दै हुनुहुन्छ। यस अवस्थामा, माइग्रेसनले तपाईंलाई धेरै फाइदाहरू दिन्छ। तपाईं बढि जिज्ञासाहरू ह्यान्डल गर्न सक्षम हुनुहुन्छ, तपाईं प्रणालीहरूसँग एकीकृत गर्न सक्नुहुनेछ, जस्तै। थोक बिक्रेताको लागि, जसले तपाईंको व्यवसाय बढाउँदछ र CMS ले तपाईंको लागि सजिलो बनाउँदछ।
अर्को प्रकारको माइग्रेसन एक डोमेनबाट अर्कोमा छ। त्यसोभए हाम्रो स्टोर, उदाहरणका लागि, एक्स नामको आधारमा अपरेट भयो, तर केही समय पछि हामीले फेला पार्यौं कि यो परिवर्तन गर्ने समय हो र हाम्रो ब्रान्डको फरक नाम हुनुपर्दछ। त्यसकारण हामी नयाँ डोमेन किन्छौं र अर्कोलाई स्टोरमा स्विच गर्न चाहन्छौं।
कहिलेकाँही यो पनि हुन्छ कि यदि, उदाहरणका लागि, हामीसँग कुनै डोमेन छ जुन केही हदसम्म पीडित छ (उदाहरणका लागि फिल्टर यसमा लागु गरिएको छ) र हामी जान्दछौं कि केहि पनि प्राप्त गर्न सकिदैन, तब हामी डोमेन परिवर्तन गर्ने बारे पनि विचार गर्छौं। त्यसो भए हामीले डोमेनको अर्को डोमेनमा सार्ने काम गरिरहेका छौं।
हामी माईग्रेसनसँग पनि सम्झौता गर्छौं जब हामी हाम्रो स्टोरको उपस्थिति अपडेट गर्न चाहन्छौं - हामी यसको टेम्प्लेट परिवर्तन गर्दछौं, हामी केवल पृष्ठ परिवर्तन गर्छौं, मतलब, दृश्य दृश्य जुन प्रयोगकर्ताहरूले देख्दछन्। यसले प्रायः URL मार्ग परिवर्तन गर्ने समावेश गर्दछ, त्यसैले यहाँ माइग्रेसन आफै र यसको सही कार्यान्वयन पनि धेरै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। किनकि हामी के गर्न चाहान्छौं हाम्रो लागि राम्रोसँग काम गरेर ती सुविधाहरू थप्न वेबसाइटमा ट्राफिकलाई अझ ठूलो बनाउन।
यस कारणका लागि, हामीले केहि नियमहरू सम्झनु पर्दछ जुन हामीलाई प्राप्त गरिसकेको गुमाउनबाट रोक्छ। सम्भवतः हामी मुख्यतया माइग्रेसन पुनःनिर्देशनको साथ सम्बद्ध गर्दछौं। त्यसोभए यदि तपाईंले माइग्रेसनहरू मध्ये कुनै गर्नुभयो भने, सायद कसैले तपाईंलाई "याद राख्नुहोस्, एउटा पुनःनिर्देशन गर्नुहोस्" भन्नेछ। र यो सहि हो, अवश्य पनि पुनर्निर्देशनहरू महत्त्वपूर्ण छन्, तर त्यहाँ अन्य धेरै तत्त्वहरू पनि छन् जुन माइग्रेसन सफल हुनेछ वा हुँदैन भन्नेमा असर गर्दछ।
मलाई विश्वास गर्नुहोस्, यदि तपाईं माईग्रेसनको लागि राम्रो तयारी गर्नुभएन भने, तपाईं प्रक्रियामा केही गल्तीहरू गर्नुहुनेछ, परिणामहरू साँच्चिकै निर्देशित हुन सक्छ। माइग्रेसनको लागि तयारीको लागि, तपाईंले यसलाई राम्रोसँग योजना गर्नुपर्दछ र त्यसपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ, र वेबसाइटले कसरी प्रतिक्रिया देखाउँदछ खराब नराम्रो माइग्रेसन पछि के भएको हो भनी पक्राउ भन्दा कसरी सजिलो हुन्छ।
यदि हामी वेबसाइटको नयाँ संस्करणमा काम गर्दैछौं भने हामी प्राय: विकास संस्करणसँग डिल गर्दछौं। त्यसोभए यो पृष्ठ हो जुन दुबै प्रयोगकर्ता र खोजी ईन्जिनहरूमा पहुँच योग्य हुनुहुँदैन, र नोइन्डडेक्स नोफोलो प्यारामिटरहरू मार्क गर्नु पर्छ। यस विधिलाई धन्यवाद, हामी हाम्रो वेबसाइटलाई अनुक्रमणिका हुन दिदैनौं र हामी यसमा स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न सक्दछौं।
यो विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ यदि, उदाहरणका लागि, हामीले पुरानो पृष्ठबाट सामग्रीलाई नयाँमा हस्तान्तरण गर्छौं, किनकि यदि Google, यदि हाम्रो विकास पृष्ठमा पुग्छ भने, यसलाई सूचकांकमा सुरू गर्दछ। त्यसो भए खोज ईन्जिन अनुक्रमणिकाले दुबै नयाँ र पुरानो पृष्ठबाट सामग्री समावेश गर्दछ - त्यसो भए हामीले नक्कलको साथ व्यवहार गर्नुपर्नेछ।
अनुक्रमणिकाको लागि खोजी ईन्जिनको रोबोटबाट विकास संस्करण ब्लक गरिएको तथ्यको कारण, हामी यसलाई स्क्र्याच पेपरको रूपमा व्यवहार गर्न सक्दछौं। हामी सुरक्षित रूपमा केहि समाधानहरू योजना गर्न सक्छौं, केही तत्वहरू शान्तपूर्वक लागू गर्न सक्छौं र यसले वेबसाइटको दृश्यतामा नकरात्मक प्रभाव पार्दैन। हामी, उदाहरण को लागी मेनू संरचना योजना र यूआरएल धेरै बार परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्य विश्वमा यो सम्भव छैन, किनकि यदि क्रलरले दिएको URL फेला पार्छ र अनुक्रमणिका गर्छ, तब यदि हामीले यो ठेगाना परिवर्तन गर्‍यौं र हामी रिडाइरेक्टहरू सिर्जना गर्दैनौं भने 4०4 त्रुटि देखा पर्नेछ।
विकास संस्करणको मामलामा, यो पनि महत्त्वपूर्ण छ कि यदि, उदाहरणका लागि, तपाइँले सहयोग गर्ने एक एसईओ कम्पनीको पहुँच छ भने, यसले यसमा स्वतन्त्र रूपमा पनि काम गर्न सक्छ, यसलाई स्थानान्तरण गर्न र मईग्रेसनमा मद्दत गर्न सक्छ। यदि यो त्यहाँ छैन र हामी एक जीवित जीव मा काम गर्दैछौं, यो धेरै धेरै गाह्रो काम हो।
तपाईंको सबै सामग्री सार्नुहोस्
एक विकास संस्करणको साथ, हामी अन्य तत्वहरू बिर्सन सक्दैनौं जुन पनि सफल माइग्रेसनको मामिलामा महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यदि हाम्रो स्टोर पहिले नै अप्टिमाइज गरिएको थियो भने, यसमा वर्गहरू र हामीले अनुकूलन गरेका उत्पादनहरूमा सामग्रीहरू थिए र हामी ट्राफिक उत्पन्न गर्न जान्दछौं भने, त्यसो भए हामीले यहाँ सबै सामग्रीहरू एक साइडबाट अर्कोमा ट्रान्सफर गर्न बिर्सनु हुँदैन।
त्यसोभए हामी शीर्षक, मेटा विवरण, वर्णन साथै उनीहरूको पुरानो पृष्ठमा स्वरूपण सारियो। यदि साइटमा वैकल्पिक विवरणहरू छन् भने, हामीले यो पनि सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि नयाँ पृष्ठमा देखा पर्दछ। समान हेडिingsहरूमा लागू हुन्छ - त्यो हो, यदि हामीले हाम्रो वेबसाइटमा हेडिingsहरू अप्टिमाइज गर्‍यौं भने, उही हेडरहरू पृष्ठको नयाँ संस्करणमा हुनुपर्दछ। यी तत्वहरूले हाम्रो नयाँ वेबसाइटमा स्विच पछि यसको कारण यो पहिले नै श्रेणी हुनेछ।
अवश्य पनि, यो अग्रिम तयारीको लागि योग्य छ जुन नयाँलाई पुरानो ठेगानाहरूको पुनःनिर्देशित नक्शा सिर्जना गर्दैछ, ताकि पृष्ठमा फर्किने मात्र पुनर्निर्देशित हुन्छ र गुगललाई छिटो देख्न मद्दत गर्दछ कि यदि ती वेबसाइटमा प्रविष्ट भएमा यी पुनःनिर्देशनहरू अवस्थित छन्।
सबै उपपृष्ठहरू पुनर्निर्देशित गर्नुहोस्
जब यो पुनःनिर्देशनहरूको लागि आउँदछ, आधारभूत त्रुटि यो हो कि हामी केवल होम पेजलाई रिडायरेक्ट गर्दछौं। यदि, उदाहरणका लागि, हामी डोमेन परिवर्तन र एक अर्को बाट परिवर्तन, हामी मात्र होम पेज पुनर्निर्देशित। कोटिहरू, उत्पादनहरू, ब्लग लेखले हामीलाई रुचि राख्दैन - यो धेरै ठूलो गल्ती हो।
प्रत्येक उपपृष्ठको आफ्नै दृश्यता हुन्छ, जुन हामी केहि समयको लागि निर्माण गर्दै छौं। यो अप्टिमाइज गरिएको छ, बाहिरबाट जोडिएको छ ... त्यसैले यदि नयाँ ठेगाना साइटको संरचनामा देखा पर्दछ, यो भर्खरै ताजा छ र हामीले यस ठेगानालाई पुरानोबाट नयाँमा पुनःनिर्देशित गरेसम्म यसलाई मजबूत नगरेसम्म यो मानिन्छ कि हामी यसलाई निर्माण गर्छौं। सबै खरोंचबाट। अवश्य पनि, हामी सारिएका शीर्षक तत्वहरू वा नयाँ पृष्ठमा लागू गरिएको सामग्रीले हामीलाई यहाँ मद्दत गर्दछ, तर हामी पुरानो उपपृष्ठको शक्ति हस्तान्तरण गर्दैनौं।
1०१ पुनःनिर्देशनको लागि धन्यवाद, हामी पहिले नै काम गरिरहेका चीजहरू हराउँदैनौं, त्यसैले ठेगानाहरू १: १ ट्रान्सफर गर्न यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसोभए यदि हामीसँग कोटी ठेगानाहरू छन्, हामीले प्रत्येक श्रेणीलाई यसको समकक्षमा पुनःनिर्देशित गर्नुपर्दछ। उस्तै उत्पादनहरूको लागि जान्छ। अवश्य पनि, यदि त्यहाँ यी धेरै उत्पादनहरू छन्, र हामी सर्वरलाई एकदम ढिलो गर्न चाहँदैनौं, तब तपाईं अवश्य पनि उत्पादनहरूको एक अंश छनौट गर्न सक्नुहुनेछ वा केवल नियमहरू लागू गर्न सक्नुहुनेछ।
निस्सन्देह, हामी आफैंलाई सजिलो बनाउन सक्दछौं जब हामीसँग सिर्जना ठेगानाहरूको विकल्प छ जुन हामी पृष्ठ डिजाइन गर्दा समान देख्दछौं। त्यसोभए यदि हामीले पुरानो र नयाँ स्टोरमा URLs को संरचना परिवर्तन गर्दैनौं, भने पक्कै पनि हामीले यी रिडाइरेक्टहरू सिर्जना गर्नुपर्दैन। जहाँसम्म, यदि हामी परिवर्तन गर्दछौं, उदाहरणका लागि, एक CMS, यो प्राय: असम्भव हुन्छ र यी पुनःनिर्देशहरू प्रदर्शन गर्नुपर्दछ।
1०१, 2०२ होईन
हामीले सबै पुनर्निर्देशनहरू सिर्जना गरेपछि, हामीले यो याद राख्नुपर्दछ कि यी पुनर्निर्देशनहरू स्थायी पुनर्निर्देशनहरू हुनुपर्दछ, भन्नुपर्दा, 1०१ पुनर्निर्देशनहरू। 2०२ पुनर्निर्देशनहरू, जुन प्राय: प्रदर्शन पनि गरिन्छ, अस्थायी पुनर्निर्देशन हुन् - तिनीहरू ती उप-पृष्ठहरूको शक्ति स्थानान्तरण गर्दैनन् जुन मैले पहिले तपाईंलाई भनेको थिएँ।
यदि हामी नयाँ पृष्ठ खोल्छौं भने, हामीले यो पक्का गर्नुपर्दछ कि हाम्रो वेबसाइटसँग गुगल एनालिटिक्स र गुगल खोजी कन्सोल कोडहरू छन्। यसका लागि धन्यबाद, हामी हाम्रो वेबसाइटमा के भइरहेको छ र यो कसरी व्यवहार गर्छ भनेर अवलोकन गर्न सक्षम हुनेछौं।
यदि हामीले व्यक्तिगत चरणहरू पूर्ण गरिसकेका छौं र गुगलद्वारा हेर्नका लागि पृष्ठहरू तयार छन् भने, हामी पाठ्यक्रम खोजी कन्सोलमा पुन: अनुक्रमणिकामा सबमिट गर्न सक्छौं। हामीले नयाँ कन्सोलमा नयाँ नक्शा अपलोड गर्न सक्दछौं ताकि नयाँ पृष्ठको सामग्री पहिचान गर्न सजिलो होस् - यो अलि छिटो हुन्छ।
हामीले यो पनि याद राख्नुपर्दछ कि पहिलो अवधिको लागि, गुगलले नयाँ पृष्ठ सूचकांक राख्छ, तर यसले पुरानोलाईलाई अनुक्रमणिकामा राख्दछ, त्यसैले हामीले यसलाई पुरानो पृष्ठलाई अनुक्रमणिकाबाट हटाउनका लागि समय दिनुपर्दछ र नयाँ पृष्ठमा यसको ठाउँमा सम्मिलित हुन। हामी के हुन्छ भनेर पहिलो तीन देखि छ महिनामा हेर्नेछौं।
अवश्य पनि, उपकरणहरूमा जुन हामीलाई दृश्यात्मकता देखाउँदछ, हामी पनि उदाहरणको लागि हेर्न सक्दछौं। समय अवधिमा गिरावट, तर त्यसपछि यस पक्षले बाउन्स गर्न सुरू गर्दछ। यदि यो केस हैन भने तपाईले के गलत भयो जाँच गर्नु पर्छ। यस्तो लाग्न सक्छ कि तपाईंको विकासकर्ताले 1०१ रिडिरेक्टहरू परिचय गर्‍यो, र यी रिडाइरेक्टहरू 2०२ रीडायरेक्टहरू हुन्। त्यसैले यी चीजहरू बस प्रवास पछि ठीक लिनुपर्नेछ।
पृष्ठ सार्दा यी सब भन्दा साधारण गल्तीहरू थिए। यदि हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो प्रवास गलत तरिकाले गरिएको थियो, के यसको मतलब हाम्रो पक्ष असफल हुन बर्बाद भयो? पूर्ण रूपमा होईन। तपाई निश्चित रूपमा रिकभरी योजनाको परिचय मात्र दिन सक्नुहुन्छ जुन महत्त्वपूर्ण हुन्छ समय हो। यदि वेबसाइट माइग्रेसन सही ढ carried्गले गरिएको छैन भने, पहिलो महिनाको लागि हामीसँग अझै पनि हामीले गुमाएको ट्राफिक पुन: प्राप्ति गर्ने अवसर छ। पछि - यदि गुगलले खोज ईन्जीनबाट पुरानो ठेगानाहरू हटायो भने - यो अझ धेरै गाह्रो हुन सक्छ।